ZombsRoyale.io - 2D တိုက်ပွဲ Royale (ZombsRoyale.io - 2D Battle Royale) - 2Game
ZombsRoyale.io – 2D တိုက်ပွဲ Royale (ZombsRoyale.io – 2D Battle Royale)
▪ Author: End Game
▪ Latest version: 1.0.5
100 ကိုကစားသမားများ၏စစ်မြေပြင်ရိုက်ထည့်ပါနှင့် Zombs Royale.io အတွက်ချန်ပီယံဖြစ်လာရန်သင့်ရဲ့လမ်းကိုစစ်တိုက်ခြင်း။
Spinz.io နှင့် Zombs.io ၏ဖန်တီးသူထံမှပြီးသား web ပေါ်မှာသန်း 10 ကျော်ကစားသမားများကကစားလျက်ရှိသည့် 100-လူတစ်ဦး 2D, multiplayer, Real-time စစ်တိုက် Royale ဂိမ်းလာ! ယနေ့ ZombsRoyale.io Play!
Zombs Royale Mode
သင့်ရဲ့ mode ကိုရှေးခယျြပါ!
– တစ်ကိုယ်တော် (ပြီးခဲ့သည့်တဦးတည်းရပ်တည်မှုဖြစ်လာမယ့်တိုက်ပွဲထဲမှာ 99 ကတခြားတစ်ကိုယ်တော်ကစားသမားဆန့်ကျင်ကိုယ့်ကိုကိုယ်အားဖြင့်ဆော့ကစား)
– Duo (သစ်တစ်ခုအသင်းဖော်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတစ်ဦး, ဒါမှမဟုတ်အော်တိုပွဲစဉ်နှင့်အတူဆော့ကစား!)
– Squad (သင်အသကျရှငျကအကောင်းဆုံးအသင်းပါပဲသက်သေပြဖို့4ကစားသမားတစ်ဦးကစားသမားစုဝေး)
ကန့်သတ်အချိန် Modes သာ (တိုင်းတနင်္ဂနွေ) တို့ပါဝင်သည်:
ဖုတ်ကောင် – တခြားကစားသမား / အသင်းများကိုဆန့်ကျင်သင့်အသက်တာအတွက်တိုက်ပွဲနှင့်အတူသငျသညျမြားကိုလညျး spawn ကြောင်းဖုတ်ကောင်များ၏အလုံးအရင်းဆန့်ကျင်ခုခံကာကွယ်ရမယ် (နှင့်သူတို့ညမှာပိုမိုအားကောင်းရ!)
50v50 – လုံလောက်တဲ့မဟုတ်4player ကိုသင်း? လွှမ်းမိုးမှုတစ်ခု All-ထွက်ရန်ပွဲများတွင်မည်သို့ 50 လောက်လူအဖွဲ့များ
အဆောက်အအုံလုပ်ကွက် – အဆောက်အဦးများအတွက် knack ရှိပါသလား? အဆောက်အအုံလုပ်ကွက် mode ကိုအားလုံးအနေဖြင့်နေဆဲနောက်ဆုံးလူကို / အသင်းရပ်တည်မှုဖြစ်လာဖို့ကြိုးစားနေ, သင်ရန်ပွဲအလယ်၌ကာကွယ်ရေးနှင့်အမိုးအကာတည်ဆောက်ခွင့်ပြု!
အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်လိုအပ်သည်။ Cross-platform ကို iOS, Web ကို, PC အတွက်ရရှိနိုင်
အလှကုန် – 1000 ကျော်ထူးခြားတဲ့ဇာတ်ကောင်အလှကုန်သို့သော်အချို့သော In-ဂိမ်းပစ္စည်းများ (Non-ချိန်ခွင်လျှာပြောင်းလဲ) ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်လိမ့်မည်, In-ဂိမ်းဒင်္ဂါးပြားကနေတဆင့်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်!
ဦးဆောင် – သင်ကအကောင်းဆုံးပါပဲကြောင်းပြသရန်ဦးဆောင်၏အပေါ်ဆုံးမှတက်။ သငျသညျအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ပွဲစဉ်သို့မဟုတ်အချိန်နှုန်းပပျောက်ရေးအတွက်အခြားကစားသမားဆန့်ကျင်တက်သီးနှံများကိုဘယ်လိုကြည့်ရှုပါ!
ရာသီ – တိုင်းရာသီရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာရှည်နှင့်သင့်စွမ်းဆောင်ရည်ပေါ် မူတည်. အသီးအသီးရာသီမှထူးခြားသောအလှကုန်ပေးရန်မည်! ပိုပြီးအနိုင်ရခြင်းနှင့်သင်တစ်ဦးသိပ်မြန်အရှိန်အဟုန်မှာဆုလာဘ်ရရှိနိုင်တော့မည်မယ်!
ဆုလာဘ်များ – Daily သတင်းစာနှင့်အပတ်စဉ်ထုတ်ဆုလာဘ်သင်သည်သင်၏ဇာတ်ကောင်များအတွက်အထူးဒင်္ဂါးပြားသို့မဟုတ်အလှကုန်လက်ခံရရှိမည်, မရရှိနိုင်များမှာ!
သူငယ်ချင်းများ / Clan – သူငယ်ချင်းများနှင့်မျိုးနွယ်စုများ (မကြာမီ) ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်! တွေ့ဆုံနှင့် In-ဂိမ်းကသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်ကစားသမားကိုတက်နှင့်အတူထွက်ဆွဲထား!
discord.gg/zombsroyale: သင်အကူအညီတောင်းသို့မဟုတ်မည်သည့်ထောက်ခံမှုလိုအပ်ခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏အရာရှိတဦးကစိတ်တိုးပွားအပေါ် 20,000 ZombsRoyale.io ‘s ကျော် join
Android အတွက် ZombsRoyale.io – 2D တိုက်ပွဲ Royale (ZombsRoyale.io – 2D Battle Royale) အလွန်ရေပန်းစားသည်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဂိမ်းကစားထောင်ပေါင်းများစွာ၏မည်သည့်ငွေပေးချေမှုမပါဘဲရဖို့အတှကျဝမျးသာပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်သင်ကူညီနိုငျပါသညျ! အခမဲ့ဂိမ်းကို download လုပ်ပါရန်။ ဒေါင်းလုပ်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: လိုချင်သောဖိုင်ကိုရွေးသင် file ကိုရချင်သောနညျးလမျးမြား၏တဦးတည်းကိုရွေးပါထို့နောက် "အခမဲ့ ZombsRoyale.io – 2D တိုက်ပွဲ Royale (ZombsRoyale.io – 2D Battle Royale) apk download လုပ်ပါ" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အနည်းငယ်လွယ်ကူသောခြေလှမ်းနှငျ့သငျတက်ဘလက်သို့မဟုတ်ဖုန်းများအတွက်ဂိမ်းအပြည့်အဝဗားရှင်းခံစားကြသည်! မိုဘိုင်းဂိမ်းကိုခံစားဖို့အကောင်းဆုံး gadgets တစ်ခုမှာ iPhone ကိုဖြစ်ပါသည်, ZombsRoyale.io – 2D တိုက်ပွဲ Royale (ZombsRoyale.io – 2D Battle Royale) iOS အတွက်ထိပ်တန်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမဆိုငွေပေးချေခြင်းမရှိဘဲပြုလုပ်ကစားရန်သင့်ကိုကူညီနိုငျပါသညျ! iPhone အတွက် ZombsRoyale.io – 2D တိုက်ပွဲ Royale (ZombsRoyale.io – 2D Battle Royale) ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့, ငါတို့သည်သင်တို့၏ကိရိယာ၏မော်ဒယ်ကို select ရန်သင့်အားအကြံပြု, ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်ကအသင့်တော်ဆုံးဂိမ်း app များကိုရှေးခယျြပါလိမ့်မယ်။ ဒေါင်းလုပ်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: လိုချင်သော .ipa ဖိုင်ကိုရွေးသင်ကစားပွဲရချင်သောနညျးလမျးမြား၏တဦးတည်းကိုရွေးပါထို့နောက် "အခမဲ့ ZombsRoyale.io – 2D တိုက်ပွဲ Royale (ZombsRoyale.io – 2D Battle Royale) ကို download လုပ်ပါ" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အနည်းငယ်လွယ်ကူသောခြေလှမ်းနှင့်သင်အိုင်ပက်သို့မဟုတ်, iPod တို့အတွက် ZombsRoyale.io – 2D တိုက်ပွဲ Royale (ZombsRoyale.io – 2D Battle Royale) ခံစားနေကြသည်။ ထိုအသတိရ! ကျနော်တို့နေ့စဉ်အခမဲ့ IPA ဂိမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုကို update ဒါညှိနေဖို့!
Read more: ZombsRoyale.io - 2D Battle Royale